Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Dareenka Wadaniga Dhabta Ah Waa JWXO. By, C/lahi Cabdi Ibrahim
Maqaal: Dareenka Wadaniga Dhabta Ah Waa JWXO. By, C/lahi Cabdi Ibrahim
Posted by Dayr	/ January 15, 2019
Himilada hanaanka hanashada hankeena waa mid ku fadhiya yool ka gaadhista yididiilada dhabta ah. Waxaan raad goobaynaa waa guusheena, taasina waa mid si wayn uga dhex muuqata dareenka Bulsho waynteena oo si wayn ula haya ONLF oo hormuud ka ah afkaarta xorta ah ee jiritaanka dadkeena.
Kalsoonida lagu qabo ayaa waxaa hoy u ah, niyad samaanta iyo matalida saxda ah ee markasta u ah Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) halku dhaga hanashada sharafta ummadeena. Ruug cadaanimada kawaadirteena waa mid caalamka ka dhaadhicinaysa waxaan ujeedno in uu yahay xaqeena iyo aayaha shacabkan inta badan soo dulmanaan jiray.
Xaqiiq-dii waxaa marag madoon ah inayna marna u rumoobaynin riyada haad raacayaasha fartooda aan naqaan!
Kuwaasi oo xaalkoodu yahay sidii indhoolihii yidhi waan dhuuman si cadna loogu qeexay inuu meel cidla ah fadhiyo!
Inta gun-nnimada u xaglisa xagaldaacintoodu waa mid sahlan markasta meelna ma gaadhaan. Hanaanka hufan ee loo riyaaqay ayaa ah kan Wadaniga dhabta ah ee JWXO mana aha mid sharaxaad dheer u baahan. Halka aan usoconaa waa mid ayna hor istaagi karin dabadhilif qalbi-rogan.
Korwaayeel waa wada indho kasbashada quluubta bulshada rayidka ah ma aha xoog lagu hanto; balse waa rabitaan daacadnimo Huwan. Xikmada mudan in la xasuusnaado ayaa ah inaan xaqiiqada ogaano, taasi oo ay barbar socoto inaan wajahno waayaha nolosha ee dhabta ah sidoo kale.